प्रेषित ५ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद (२०१०)
५ त्यसैगरि, हननिया नाम गरेका एक जना मानिस र तिनकी पत्नी सफीराले आफ्नो एक टुक्रा जमिन बेचे। २ तर त्यसबाट आएको रकमको केही हिस्सा लुकाएर बाँकीचाहिं लगेर प्रेषितहरूको चरणमा राखिदिए। यो कुरा तिनकी पत्नीलाई पनि थाह थियो। ३ तर पत्रुसले भने: “ए हननिया, जमिन बेचेर आएको रकमबाट केही हिस्सा लुकाएर पवित्र शक्तिलाई ढाँट्न सैतानले तिमीलाई कसरी सुऱ्यायो? ४ तिमीसित रहुन्जेल के त्यो तिम्रै थिएन र? अनि बेचिसकेपछि पनि त्यसबाट आएको रकम तिम्रै थियो नि, होइन र? यस्तो काम गर्ने सोचाइ तिम्रो मनमा कसरी आयो? तिमीले मानिसहरूलाई होइन तर परमेश्वरलाई ढाँटेका छौ।” ५ यो कुरा सुनेर हननिया भुइँमा पछारिए अनि मरे। अनि यसबारे सुन्नेजति सबैमा ठूलो डर छायो। ६ तब युवकहरू उठेर तिनलाई कपडाले बेरे अनि बाहिर लगेर गाडिदिए। ७ लगभग तीन घण्टापछि तिनकी पत्नी भित्र आइन्‌ तर त्यहाँ भएको घटनाबारे तिनलाई थाह थिएन। ८ पत्रुसले तिनलाई सोधे: “मलाई भन, के तिमीहरू दुई जनाले त्यो जमिन यत्तिमै बेचेका हौ त?” तिनले जवाफ दिइन्‌: “त्यत्तिमै हो।” ९ त्यसैले पत्रुसले तिनलाई भने: “तिमीहरू दुई जनाले यहोवाको पवित्र शक्तिको परीक्षा गर्ने मतो किन गऱ्यौ? हेर, तिम्रो पतिलाई गाड्नेहरूले भर्खर ढोकामा पाइला टेक्दैछन्‌। अब तिनीहरूले तिमीलाई पनि बाहिर लैजानेछन्‌।” १० उत्तिखेरै तिनी उनको चरणमा पछारिइन्‌ र मरिन्‌। तब ती युवकहरू भित्र पसे र तिनलाई मरिसकेको पाए। त्यसैले उनीहरूले तिनलाई बोकेर बाहिर लगे र तिनको पतिको छेवैमा गाडिदिए। ११ यसले गर्दा सारा मण्डलीमा र यस घटनाबारे सुन्नेजति सबैमा ठूलो डर छायो। १२ यसबाहेक, प्रेषितहरूले मानिसहरूमाझ थुप्रै चमत्कार र आश्चर्यजनक कार्य गर्दै रहे; अनि सबै चेलाहरू एकै मनका भएर सुलेमानको दलानमा भेला हुन्थे। १३ यो सत्य हो, मानिसहरूमध्ये एक जनाले पनि चेलाहरूको समूहमा सामेल हुने आँट गरेन; तैपनि, तिनीहरू उनीहरूको तारिफ गर्थे। १४ यति मात्र होइन, पुरुष र स्त्रीहरूको ठूलो भीडले प्रभुमा विश्वास गऱ्यो अनि तिनीहरू उहाँको चेला बने; १५ यहाँसम्म कि, पत्रुस आफ्नो बाटो भएर जाँदा कमसेकम तिनको छाया मात्र भए पनि कसैमाथि परोस् भनेर तिनीहरूले बिरामीहरूलाई मूल बाटोमा ल्याएर ओछ्यान र खटियामा सुताउँथे। १६ साथै, यरूशलेम वरपरका सहरहरूबाट भीडका भीड मानिसहरू बिरामीहरूलाई र दुष्ट स्वर्गदूतद्वारा सताइएकाहरूलाई लिएर आउँथे अनि तिनीहरू सबका सब निको हुन्थे। १७ तर प्रधान पुजारी र उनीसँग हुनेजति सबै अर्थात्‌ त्यतिखेरको सदुकी गुटका मानिसहरू डाहले भरिए अनि प्रेषितहरूविरुद्ध खडा भए १८ अनि तिनीहरूलाई पक्रेर झ्यालखानामा हालिदिए। १९ तर राती यहोवाको स्वर्गदूतले झ्यालखानाको ढोका खोलिदिए अनि तिनीहरूलाई बाहिर ल्याएर भने: २० “तिमीहरू आफ्नो बाटो लाग अनि मन्दिरमा खडा भएर अनन्त जीवनको विषयमा मानिसहरूलाई सबै कुरा बताइरहो।” २१ यो सुनेपछि, बिहान हुनेबित्तिकै मन्दिरभित्र पसेर तिनीहरूले सिकाउन थाले। जब प्रधान पुजारी र तिनीसँग हुनेहरू आइपुगे, तब तिनीहरूले यहूदी न्यायपरिषद् र इस्राएलीहरूका धर्म-गुरुहरूको सम्पूर्ण सभाका सबैलाई बोलाए अनि प्रेषितहरूलाई झ्यालखानाबाट ल्याउन पालेहरू पठाए। २२ तर झ्यालखानामा पुग्दा पालेहरूले तिनीहरूलाई भेटेनन्‌। त्यसैले फर्केर तिनीहरूले यस्तो खबर दिए: २३ “हामीले झ्यालखाना सुरक्षितसाथ बन्द गरेर राखिएको अनि पहरेदारहरू ढोकामा उभिरहेका भेट्टायौं तर ढोका खोलेर भित्र हेर्दा कसैलाई फेला पारेनौं।” २४ यो कुरा सुनेपछि मन्दिरका पालेहरूको नाइके र मुख्य पुजारीहरू अब के हुने होला भनेर दुविधामा परे। २५ तर कोही एक जना आएर तिनीहरूलाई भन्यो: “हेर्नुहोस्, तपाईंहरूले जसलाई झ्यालखानामा थुन्नुभएको थियो, तिनीहरू त मन्दिरमा खडा भएर मानिसहरूलाई सिकाउँदै पो छन्‌।” २६ तब आफ्ना मानिसहरूसित गएर मन्दिरका पालेहरूको नाइकेले तिनीहरूलाई ल्याए तर उनीहरूले जबरजस्ती भने गरेनन्‌, किनकि मानिसहरूले ढुङ्गा हान्लान्‌ भनेर उनीहरू डराएका थिए। २७ अनि उनीहरूले तिनीहरूलाई यहूदी न्यायपरिषद् भवनमा लगेर खडा गराए। त्यसपछि प्रधान पुजारीले यसो भन्दै तिनीहरूलाई केरकार गरे: २८ “यो नाममा सिकाउँदै नसिकाउनू भनेर हामीले तिमीहरूलाई कडा आज्ञा दिएका थियौं तर हेर, तिमीहरूले आफ्नो शिक्षाले सारा यरूशलेम भरिसक्यौ अनि त्यस मानिसको रगतको दोष हामीमाथि थोपर्न तिमीहरू लागिपरेका छौ।” २९ तब पत्रुस र अरू प्रेषितहरूले यस्तो जवाफ दिए: “हामीले मानिसहरूको भन्दा परमेश्वरको आज्ञा मान्नै पर्छ। ३० हाम्रा पुर्खाहरूका परमेश्वरले येशूलाई ब्यूँताउनुभयो, जसलाई तपाईंहरूले खम्बामा टाँगेर मार्नुभएको थियो। ३१ इस्राएलले पश्‍चात्ताप गरोस् र पापहरूको क्षमा पाओस् भनेर परमेश्वरले उहाँलाई मुख्य माध्यम र उद्धारकको रूपमा उच्च पार्नुभयो अनि आफ्नो दाहिने बाहुलीतर्फ राख्नुभयो। ३२ हामी यी सबै कुराको साक्षी छौं। त्यसैगरि, परमेश्वरले आफ्नो आज्ञा पालन गर्नेहरूलाई दिनुभएको पवित्र शक्ति पनि त्यसको साक्षी छ।” ३३ यो सुनेर तिनीहरू रिसले चूर भए अनि उनीहरूलाई मार्न खोजे। ३४ तर यहूदी न्यायपरिषद्का एक जना सदस्य खडा भए। तिनी गमलिएल नाम गरेका फरिसी थिए, जो मोशाको व्यवस्थाका शिक्षक थिए र सबै मानिसले तिनको सम्मान गर्थे। तिनले उनीहरूलाई केही बेर बाहिर राख्ने आदेश दिए। ३५ गमलिएलले तिनीहरूलाई भने: “हे इस्राएलका मानिसहरू हो, तपाईंहरूले यी मानिसहरूलाई जे गर्न लाग्नुभएको छ, त्यसबारे राम्ररी सोचविचार गर्नुहोस्। ३६ उदाहरणका लागि, यसअघि पनि थूदास भन्ने एक जना मानिस आफूलाई को-को न हुँ भन्दै खडा भएको थियो अनि चार सयजति मानिसहरू उसको पछि लागेका थिए। तर ऊ मारियो अनि उसको कुरा मान्नेहरू सबै तितरबितर भएर हराए। ३७ त्यसपछि जनगणनाको समयमा यहूदा भनिने एक जना गालीली खडा भयो अनि उसले पनि मानिसहरूलाई आफ्नो पछि-पछि लगायो। तैपनि, त्यो मानिस नष्ट भयो अनि उसको कुरा मान्नेहरू सबै यताउता छरिए। ३८ त्यसैले अहिलेको अवस्थालाई विचार गर्दै म तपाईंहरूलाई के भन्छु भने, यी मानिसहरूको काममा हस्तक्षेप नगर्नुहोस्, बरु तिनीहरू जे गर्दैछन्‌, गर्न दिनुहोस्; किनकि यदि यो योजना वा यो काम मानिसहरूको तर्फबाट हो भने त्यो आफै हराएर जानेछ; ३९ तर यदि परमेश्वरको तर्फबाट हो भने तपाईंहरूले तिनीहरूलाई नामेट पार्न सक्नुहुनेछैन; नत्र त तपाईंहरू वास्तवमा परमेश्वरविरुद्ध लडिरहनुभएको हुनेछ।” ४० तब तिनीहरूले उनको कुरा माने। अनि प्रेषितहरूलाई बोलाएर पिटे र येशूको नाममा बोल्दै नबोल्नू भन्ने आदेश दिएर उनीहरूलाई छोडिदिए। ४१ तब उहाँको नाममा अपमान सहन योग्य ठहरिएकोमा रमाउँदै यिनीहरू यहूदी न्यायपरिषद्सामुबाट निस्केर आफ्नो बाटो लागे। ४२ अनि हरेक दिन उनीहरूले मन्दिरमा र घर-घरमा गएर सिकाउन र येशू ख्रीष्टको विषयमा सुसमाचार घोषणा गर्न बन्द गरेनन्‌।